Anaanis fi ogummaa - Storybooks Kenya
Anaanis fi ogummaa Anansi and Wisdom Anansi na hekima
Yeroo durii namoonni homaa hinbekan ture. Namoonni kuni akkaitti wayya dhahan, akkaa midhaan facaasan, fi akkaiti sibilaa tuman hinbekaan ture. Ayyanni Nyamee jedhamu garuu ogummaa bayee qaba ture. Ogummaa kana okkotee keesaa ka’ee.
Gaftokko, Nyameen okkotee kan Anaanisif kennuf murtesee. Anaanis yeroo okkotee kan ilalee hundaa waan bayee bartee. Bayee dinqii ture.
Sassatuun Anaanis akkan yaade. “Okkotee tana muka gubban ka’a. Sana booda ana qofatu ittifayyadam!” Funyoo dheera fidee okkoteeti maree garaa isaa irratti hidhatee. Sana booda mukicha kore. Garu halaa saanan mukicha koru hindandenyee.
Yeroo hundaa mucaan Anaanis muka jala dhabbate ilaal ture. Akkan jedhe, “Okkotee sana oto dugdaa keetiratti hidhatee wayya ta’a lata?” Anaanis akkuma mucaan isaa jedhee sanatti dugdatti hindhatee shaakallin salphaa ta’ef.
Yerooduma san qacee mukaa irra gahee. Sana booda yadee, “Ani namaa silaa ogumma hundaa qabaachu qabu garuu mucaan koo akkamitti nacaalee!” Anaanis haala kannatti aaree okkotee mukarraa gadidarbee.
Okkoteen nicacabdee. Ogummaaan suni nama hundaafu bilsaa ta’e. Namoonni haala kanaan akkamiti akka qotan, akkamiti akka uffata dhahan, fi akkamiti akka sibiilaaf wantoota biraa hojatan baran.
Sagni xinno: Seenaa Wangaarii Matayi Noziibele fi rifeensa saddan Lukkuu fi Dhimillee Ilimo harre Sirba Sakiimaa Guyyan gara magaala deeme Lukkuu fi Risaa